တစ်ဦး POWERPOINT တင်ဆက်သို့ဗီဒီယိုတစ်ကားကိုထည့်သွင်းဖို့ကိုဘယ်လို - POWERPOINT - 2019
ဝန်ဆောင်မှု Yandex ပိုက်ဆံအိတ်ပေါ်ပြီးသားရှိနိုင်ပါဖယ်ရှားပစ်ရရန်လိုအပ်ကြောင်းမကြာခဏတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ သို့သော်အများဆုံးဖြစ်ပွားမှု၌ဤမဖြစ်နိုင်ပါ။
Yandekse.Dengi ဝန်ဆောင်မှုပေါ်ပိုက်ဆံအိတ် Remove
အကောင့် Remove နှင့် e-mail ကိုဝန်ဆောင်မှုကိုကယ်တင်သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီနှင့်အညီမဖြစ်နိုင်ပါ။ သို့သော်သုံးနညျးလမျးတစျခုထဲမှာပိုက်ဆံအိတ်နှင့်အတူပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျက၎င်း၏ "အဗဒ္ဒုန်" ကိုစတင်ခင်မှာသူတို့ recover လုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ကြလိမ့်မည်ကြောင့်အကောင့်ထဲမှာလူအပေါင်းတို့သည်ရန်ပုံငွေများကိုရုပ်သိမ်းပေးရန်သငျ့သညျ။
Method ကို 1: အကောင့် Remove
ဤကိစ္စတွင်ထဲမှာလုံးဝ mail နဲ့မဆိုပူးတွဲအကောင့်န်ဆောင်မှုများဖျက်လိမ့်မည်။ အဆိုပါရလဒ်ပိုင်ရှင်အကြောင်းကိုအပေါငျးတို့သရရှိနိုင်ပါအချက်အလက်များ၏ပျောက်ဆုံးပါလိမ့်မည်ကြောင့်ပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်ရန်မဖြစ်နိုင်ကြလိမ့်မည်။
Read more: အဘယ်သို့ငါ Yandex အပေါ်အကောင့်တစ်ခုကိုဖျက်ပစ်ပါဘူး
Method ကို 2: Yandeks.Pomosch
အချို့ကိစ္စများတွင်, ပိုက်ဆံအိတ်ဖယ်ရှားပစ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းဆိုပြဿနာစေ၏။ ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေမျိုးတွင်, အစားအသုံးအများဆုံးမေးခွန်းတွေရဲ့အဖြေနဲ့သူတို့ရဲ့ဖြေရှင်းချက်များ Yandex စာမျက်နှာ, ကူညီပေးဖို့အဖြေတစ်ခုကိုရှာဖွေသင့်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးဖျက်ခြင်း။ : ဒီလိုလုပ်ဖို့
အကူအညီစာမျက်နှာဝန်ဆောင်မှု Yandex ပိုက်ဆံသွားပါ။
လက်ဝဲဘက်မီနူးထဲမှာ, ကို item နေရာချထားခြင်းနှင့်ဖွင့်လှစ် "ဖြေရှင်းပြဿနာများ".
ထို့နောက်အသစ်အစာမကျြနှာ, ကြုံတွေ့အခက်အခဲများ၏ဖော်ပြချက်အဘို့အပါဆုံးသင့်လျော်သောခေါင်းစဉ်ကို select နှင့်ဖြစ်ပျက်အတိအကျဘာကိုဖော်ပြရန်နှင့်စာနယ်ဇင်းတွင် "သတင်းစကားကိုပို့ပါ".
သင်၏လျှောက်လွှာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးနောက်အခြေအနေကိုမှန်ကန်တဲ့ဖြေရှင်းချက်တွေနဲ့ reply ထံသို့စလှေတျပါလိမ့်မည်။
Method ကို 3: ဖယ်ရှားရေးလျှောက်လွှာ
အထက်ပါနည်းလမ်းအားလုံးသင့်လျော်သောမဟုတျပါလျှင်, တစ်ခုတည်းသောရွေးချယ်စရာန်ဆောင်မှုထောက်ခံမှုနှင့်အတူစကားလက်ဆုံကြလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်သင်ကဖုန်းခေါ်သို့မဟုတ်ဖျက်မှုသို့မဟုတ်ပိတ်ဆို့ခြင်းပိုက်ဆံအိတ်များအတွက်တောင်းဆိုမှုနှင့်အတူတောင်းဆိုချက်ကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ အထူးကိစ္စများတွင်ဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မည်ဤနည်းအတွက်ပိုက်ဆံအိတ်နှင့်စတိုးဆိုင်မေးလ်ဖယ်ရှားပစ်ရ။
Read more: Yandex ပိုက်ဆံအိတ်ဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို
သငျသညျကိုသာလုံးဝအကောင့်တွေကိုဖယ်ရှားဖို့နှင့် e-mail ကိုရတဲ့အတွက်ပိုက်ဆံအိတ် delete နိုငျသျောလညျးနည်းပညာပံ့ပိုးမှုမှတဆင့်ဒီအခက်အခဲကျော်လွှားဖို့သေးငယ်တဲ့ဖြစ်နိုင်ချေရှိပါတယ်။ ထိုအသင်တို့ကိုလည်းဖယ်ရှားဘို့လိုအပ်ကြောင်းမှဦးဆောင်သည့်ပြဿနာမှဖြေရှင်းချက်ကိုရှာဖွေနိုင်ပြီး, သူမ၏နားလည်ရန်, mail နဲ့စရိတ်ကယ်ဖို့။
ဗီဒီယို Watch: MS PowerPoint 2007 Tutorial in Hindi Urdu : Introduction - 1 (စက်တင်ဘာလ 2019).